Trump: Waxaa la joogaa xilligi buuraha Golan loo aqoonsan lahaa iney Israa’iil leedahay | Baydhabo Online
Madaxweyne Donald Trump ayaa siyaasaddi Mareykanka uu aaminsanaa xagga kale u rogay kaddib marki uu sheegay in la joogo xilligi buuraha silsiladda ee Golan oo ay Israa’iil qabsatay 1967-kii loo aqoonsan lahaa iney ka mid yihiin dhulka Israa’iil.
Madaxweyne Trump wuxuu boggiisa Tweetarka uu ku qoray iney buurahaasi ay istiraajiyad muhiim oo dhinac amniga aiyo ciidanka ay u leeyihiin Israa’iil iyo xasiloonida gobolkaba.
Israa’iil ayaa 1981-kii dhulka ay maamusho ku darsatay buuraha Golan iyada oo ay jirin aqoonsi caalami ah oo ay heshay.
Dalka Suuriya, oo buurahaasi laga haysto ayaan ilaa iyo hadda wax jawaab ah ka bixin hadalka ka soo yeeray madaxweyne trump.
Ra’isal wasaaraha Israa’iil Benjaamiin Netanyahu ayaa ka digay “Dhaqdhaqaaqyada ciidan” oo ay wadaan waddamada ay Israa’iil ku sheegtay iney cadowtinimo taariikhi ah ay ka dhaxeeyaan ee “Iiraan iyo Suuriya” isaga oo amar ku bixiyey in dhaqdhaqaqyadaasi militari weerar dhinaca cirka ah looga hortago.
Mr Trump wuxuu si aan gabbasha lahayn uu boggiisa Tweetarka ku qoray “Iney Buuraha Golan ay kamid yihiin dhulka ay leedahay Israa’iil, xilli ay Iiraan dooneyso iney burburinta Israa’iil ay u adeegsato Suuriya.
Rechard Hass, oo ah sargaal horay uga tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha Mareykanka oo hadda ka mid ah golaha looga arrimiyo siyaasadda Mareykanka “ayaa si weyn uga horyimid” hadalka Trump ka soo yeeray.
Wuxuuna sheegay “Aqoonsiga noocaasi ah oo Israa’iil la siinayo inuu ka hor imanayo qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu qeexay “dhul dagaal lagu qabsaday inaan la sheegan karin”.
Hadalka Madaxweyne Trump ayaa wuxuu imanayaa xilli uu Mr Netanayahu uu doorashada guud ee dhaceyso 9-ka bisha April laga cabsi qabo inuu guul darro kala kulmo isla markaana ay ku socoto dacwad ku saabsan fal musuqmaasuq oo uu galay.
Sanadki 2017-kii Madaxweyne Trump wuxuu magaalada Quddus uu u aqoonsaday iney tahay caasimadda rasmiga ee Israa’iil isaga oo amar ku bixiyey iney safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv loo soo wareejiyo Quddus.
Go’aanka madaweyne Trump waxaa si weyn uga horyimid Falastiiniyiinta iyaga sheegay Bariga magaalada Quddus iney tahay caasimadda dowladda Falastiin ee mustaqbalka, waxaana sida oo kale go’aankaasi cambaareeyey golaha guud ee Qaramada Midoobay wuxuuna dalbaday in go’aankaasi laga noqdo.
Maxay yihiin buuraha silisiladda ee Golan?
Buuraha Golan waxay Koonfu galbeed kaga beegan yiin caasimadda Suuriya ee Dimishiq, waxayna masaafa ahaan u jiraan 40 mile, waxay buuraha sililadda ee Golan dhirirkoodu ahaan gaarayaa 1200 kiilo mitir isku wareeg ah (400 mile).
Buuraha Golan intooda badan waxay Israa’iil ku qabsatay dagaalkai bariga dhee ka dhacay 1967-kii, dowladda Suuriyana waxay isku dayday iney buuraheeda dib uga soo ceshato Israa’iil iyada oo 1973-kii dagaal la gashay.
Waxayna dagaalkaasi kaddib labada dal ku heshiiyeen in la sameeyo dhul dhan 70 Km oo militariga ka caaggan oo ay gacanta ku hayaan ciidamada nabad ilaalin oo ka socda qaramada midoobay. Balse labada dal waxay ahaayeen waligood kuwo uu dagaal ka dhaxeeyo.
In kabadan 30 deegaan oo ay Yuhuuddu leedahay ayaa ku yaalla buuraha Golan qaybta ay Israa’iil maamusho waxaana ku nool dad lagu qayaaso 20,000. Deegaannadaasi oo lagu tilmaamo iney sharci darro yihiin marka laga eego dhanka shuruucda caalamiga ah iyada oo ay Israa’iilna ku doodeyso iney sharci yihiin.
Dadka Yuhuudda ee deegaannadaasi degganna waxay deegaan wadagaan dad Suuriyaan ah oo gaaraya 20,000 badankoodna ay yihiin Carabta Duruze loo yaqaanno oo aan meelna uga qixin marki ay buurahaasi Israa’iil qabsatay.